आर्टिष्ट खबर/ असोज, विराटनगर ।
मिस कोशीको छैठौं संस्करणको उपाधि भोजपुरकी प्रशिका श्रेष्ठले जितेकी छिन् । सुनसरीको इटहरी सम्पन्न भएको मिस कोशीको फाइनलमा २९ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै प्रशिकाले मिस कोशीको ताज पहिरिएकी हुन् । विजेता उनले स्कुटी र विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर पनि प्राप्त गरेकी छन् ।
जय मिडिया म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. विराटनगरले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको अर्गनाइजेसन च्वाइसको उपाधि झापा चारआलीकी पेरिसा बुढाथोकी भइन् । प्रतियोगिताको फस्ट रनरअप विराटनगरकी आयुषा आचार्य, सेकेण्ड रनरअप मोरङ बेलबारीकी प्रतिक्षा कार्की र थर्ड रनरअप विराटनगरकी अनुपा विष्ट घोषित भए ।
प्रतियोगितामा मिस ट्यालेन्टको अवार्ड आयुषा आचार्य, मिस डिसिप्लिनमा पूर्णिमा देवी घिमिरे, मिस फोटोजेनिकको उपाधि आकृति गिरीले प्राप्त गरिन । यस्तै मिस फ्रेण्डसीप एन्जिला पन्त, मिस क्याटवाक रिजा तामाङ, मिस ब्युटी विद दी ब्रेन आयुषा आचार्य भइन् । मिस पब्लिक च्वाइसको अवार्ड पेरिसा बुढाथोकीले जितिन् । यस्तै मिस मल्टिमिडिया प्रतिक्षा कार्की, मिस पपुलर दीपा साह, मिस स्माइल प्रशिका श्रेष्ठ, मिस कन्फिडेन्ट प्रकृति फुयाँल, मिस ब्युटिफुल सन्तोषीमाया श्रेष्ठ घोषित भए । कार्यक्रममको प्रमुख अतिथि अभिनेत्री रेखा थापा रेहकी थिइन् ।
प्रतियोगिताको निर्णायकहरूमा विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, विकास लामिछाने, कानुन व्यवसायी राजुबाबु ढकाल, मोडल आकांक्षा विश्वकर्मा थिए ।